Uncategorized Archives - Sainpwar
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ဂျူးအပိုင်း-၈ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှုတွေ ရဲဝံ့ရင်ဆိုင်မှုတွေဟာ မောင့်ရဲ့ ထိခိုက်နစ်မွန်းမှုတွေအဖြစ် အချိုးညီညီပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလားဆိုတာကိုတော့ နောက်အကျကြီးကျမှ ကိုယ်သတိထား မိလာရပါတယ်။ မောင်သိပ်တန်ဖိုးထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲ ခြေဖဝါး အောက်အထိ နိမ့်ကျသွားတော့တယ်၊ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲ မောင်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းကို ကာယကံရှင် မပေးဘဲ ခိုးယူသူဖြစ်ခဲ့တယ် ။ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အတွက် တစ်ယောက်ယောက်မှာ တာဝန်ရှိ တယ်ဆိုရင် အဲဒါ […]
အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးနှင်မသက်ဆိုင်သူအနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့ အေးနေဝင်း အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးမသက်ဆိုက်သူအနေဖြင့်တတိရောက်ခြင်တယ်လို့ အေးနေဝင်း၏သမီးဖြစ်သူက ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယိ။ အေးနေဝင်ဟာစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီကိုထာက်ခံသည့်ခရိုနီတစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုလည်းထောက်ပံနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi/ အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံမသက်ဆိုင်သူအနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့ အေးနေဝင်း အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးမသက်ဆိုက်သူအနေဖြင့်တတိရောက်ခြင်တယ်လို့ အေးနေဝင်း၏သမီးဖြစ်သူက ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယိ။ အေးနေဝင်ဟာစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီကိုထာက်ခံသည့်ခရိုနီတစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုလည်းထောက်ပံနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးနှင်မသက်ဆိုင်သူအနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့ အေးနေဝင်း အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံရေးမသက်ဆိုက်သူအနေဖြင့်တတိရောက်ခြင်တယ်လို့ အေးနေဝင်း၏သမီးဖြစ်သူက ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယိ။ အေးနေဝင်ဟာစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီကိုထာက်ခံသည့်ခရိုနီတစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုလည်းထောက်ပံနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi/ အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကို နိူင်ငံမသက်ဆိုင်သူအနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့ […]
စစ်ကောင်စီ၏ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသူ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် သေဆုံး အဲကမ္ဘောဇ (Air KBZ) လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စီး၏ Pitot tube အတွင်း သစ်ရွက်များ ထည့်သွင်းခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်၍ စစ်ကောင်စီ၏ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော လေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ ကိုမင်းမင်းစိုးသည် စစ်ကြောရေးတွင် ရသည့် ဒဏ်ရာများကြောင့် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်က သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ […]
October 18, 2021 Bo Wai 0
ဗိုက်… ဗိုက်…ဆာ..ဆာ…တယ်…😥 မိုးရေထဲ….ကားမှန်လေး ခေါက်ပြီ… ကျမ…ကျ…မ…ဗိုက်ဆာလို့ပါ…မုန့်လေးရှိရင် ပေးပါ…ကျွေးပါ 😥😥 (ကားထဲမှာလဲ မုန့်ကမပါ…နောက်မှာလဲ ကားတွေက ပိတ်နေတော့…) အကြီးရေ…မုန့်တော့ မပါလာဘူး… ရော့…10,000 Ks ယူလိုက်နော်… ထမင်းဝယ်စား…ထီးလဲ တချောင်းပေးလိုက်မယ်နော်… မိုးရေထဲ ထီးဆောင်းနော် အကြီးရေ ☺ ကျေး…ကျေး…ဇူးတင်ပါတယ်…ကျမ ထမင်းဝယ်စားလို့ ရပြီ… ထမင်းစားရတော့မယ် (ထမင်းစားရမယ်ဆိုပီ ပျော်နေရှာတယ် 😥) အော…ကျနော်တို့ဖို့ ငွေ ၁သောင်းဟာ..မသိသာပေမဲ့… တကယ် စားဖို့ခက်ခဲတဲ့သူအဖို့ကျ အတော်ပျော်ရွှင်သွားရရှာတယ် […]
unicode ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်းကတော့ ပြည်သူပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ဆန္ဒအနဲငယ်ကွဲလွဲခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်မှုအချို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို ဘယ်ဖက်ကမှလဲ့ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး အခုချိန်မှာတော့ သူဟာဝတ္တရားအရလောက်ပဲ Pray fir myanmar ဆိုပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအချစ်ရေးတွေနဲ့အလုပ်များနေခဲ့ပြီး အသဲကွဲလိုက် ဖီလ်းလိုက် ဘီယာသောက်လိုက်နဲ့ပဲသာယာနေခဲ့တာလဲဖစ်ပါတယ် ။ အခုတခါမှာတော့ သူဟာ ဘီယာဘားကအပြန်မှာတင်ခဲ့တဲ့စာတကြောင်းကတော့ အတော်လေးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျ-ည်-ထိမှန်တာဟာ အသဲကွဲသလောက်မနာကျင်ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့အတွက်မှ speak out လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပို့ကိုတော့ ၃ […]
သူတစ်ယောက်ထဲ မုန့်လေးစားနေတဲ့ပုံ ခုထိဖုန်းထဲသိမ်းထားခဲ့တယ် သိပ်သနားမိလို့ပေါ့”
သူတစ္ေယာက္ထဲ မုန့္ေလးစားေနတဲ့ပုံ ခုထိဖုန္းထဲသိမ္းထားခဲ့တယ္ သိပ္သနားမိလို႔ေပါ့ ဆႏၵျပထြက္တာေတာင္ အေပါင္းအသင္းမရွိရွာတဲ့ နယ္ကကေလး မျပည့္စုံလို႔ရန္ကုန္မွာပညာရွာအလုပ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ကေလး ေရွ႕ဆုံးမွာ ဒိုင္းကိုင္ၿပီးကာကြယ္ခဲ့သူ က်ည္မွန္ ၿပီး မ်က္လုံးတစ္လုံးေပါက္ထြက္ကာက်ဆဳံးခဲ့တယ္ ေဟာ..ခုေတာ့ မျပည့္စုံရွာတဲ့ က်န္ရစ္သူမိဘညီကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ျပည္သူေတြေဆာက္ေပးတဲ့အိမ္.. သူ ဒီလိုေလးေနခဲ့ခ်င္မလားပဲ ခု.. သူျမင္ရင္ ေပ်ာ္မွာ အသက္နဲ႕ယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ အိမ္တစ္လုံးဆိုတာ ဘာမွမဟုတ္ဘူးေပါ့ သူ႕မိဘေတြကေတာ့ သူ႕သားကိုပဲျပန္လိုခ်င္မွာ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ေမတၱာေၾကာင့္ေတာ့ အနည္းငယ္ စိတ္ေျဖသာမွာပါ က်ဆဳံးသြားတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြေရ မင္းတို႔ေတြ ျပန္မလာနိုင္ေတာ့ဘူး […]
မိုးကုတ်မြို့ တစ်နယ်လုံး အရေးပေါ်သတိရှိကြပါ….
မိုးကုတ်မြို့ တစ်နယ်လုံးတွင် စကစများ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုများ များပြားစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် မိုးကုတ်မြို့ အရှေ့ပိုင်း တွင် မနေ့ည (1)နာရီကျော်တွင် သေနတ် အချက် (20) ကျော်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မနက်ပိုင်းဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်း ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ဆွဲမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် မိုးကုတ်မြို့ အနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ညစဥ် ဆွဲခံရမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် အရေးပေါ်သတိရှိကြပါ Rubylandmogok 16.10.2021 ZAWGYI VERSION မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ တစ္နယ္လုံးတြင္ စကစမ်ား အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား မ်ားျပားစြာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္ […]
ပုလဲမြို့နယ် နဂါးမတောင်အနောက်ဘက် ဝမ်းပြင်ကျေးရွာအလွန်တွင်….
October 13, 2021 Bo Wai 0
စစ္ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေျပးတပ္အား PPDF က ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္း (႐ုပ္/သံ) ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန႔္တြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ နဂါးမေတာင္အေနာက္ဘက္ ဝမ္းျပင္ေက်း႐ြာအလြန္တြင္ ေရွ႕ေျပးလမ္းရွင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ား ပစ္ခတ္၍ တက္လာေသာ စစ္ေကာင္စီတပ္ ၃၀ ခန႔္ကို ပုလဲျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PPDF) […]
We for Revolution အဖွဲ့သားများမှ မန္တလေးပြည်သူများသို့ အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
We for Revolution အဖွဲ့သားများမှ မန္တလေးပြည်သူများသို့ အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း Block –6, unit (1,2) Flower Street , မြို့သစ် (၁) ရပ်ကွက် ၇၃ လမ်း , New Ocean , ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် , မန္တလေးမြို့ ရှိ ” မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ” ​၏ဖြစ်စဉ်မှာ သာမန်မီးလောင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ […]
ဖြစ်လာမှ ဘုရားဖူးကားတွေကို ပစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးနဲ့ လှည့်တိုက်ကြဦးမယ်လို့ PDF တွေက သတိပေးထားတဲ့ကြားထဲက ဘုရားဖူးထွက်နေတဲ့သူတွေကို စေတနာစကားပါးလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ပုံမှန်အချိန် ဘုရားဖူးထွက်တာ ထွက်ပါ။ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ တအုံးအုံးတဒိုင်းဒိုင်းတွေကြား ဘုရားဖူးထွက်နေတဲ့သူတွေကို မေးဦးမယ်။ အိမ်ကဘုရားတွေက ဘုရားမဟုတ်ကြလို့လား။ PDF တွေက သတိပေးထားတဲ့ကြားထဲက ဘုရားဖူးတွေထွက်ကြတယ်နော်။ အခုဆို ဘုရားဖူးကားတွေနဲ့ ဟိုကောင်တွေက စစ်ကြောင်းချီနေပြီ။ လုပ်ထည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်း PDFတွေက ဘုရားဖူးကားတွေကို ပစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးနဲ့ လှည့်တိုက်ကြဦးမှာ။ […]